Antsipirian'ny vokatra Ny baler dia karazan-milina famaohana mololo izay afaka mamita avy hatrany ny fanangonana, famonosana ary famaohana vary, varimbazaha ary katsaka ahodina amin'ny Round Hay Baler. Ampiasaina be izy io amin'ny fanangonana ny kijana maina sy maintso, vary, varimbazaha ary tahon-katsaka. Strapping. Ny masinina dia manana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro, ny fandidiana mety ary ny fahamendrehana avo lenta. Ny kijana fehezina dia azo ampiasaina ho sakafom-biby, mitahiry ny vidin'ny famahanana omby sy ondry. Ny mifanitsy p ...
Masinina maneloka orchard
Product Detail Orchard sprayer dia milina lehibe mifanentana amin'ny famafazana fanafody famonoana bibikely any amin'ny saham-boankazo midadasika. Izy io dia manana tombony amin'ny kalitaon'ny famafazana tsara, fampiasana pesticide ambany, fanjifana rano ambany ary fahombiazan'ny famokarana avo. Ankoatr'izay, tsy miankina amin'ny tsindry paompin-tsolika iray izy io hametrahana atomika ilay ranoka. Fa kosa, ny mpankafy dia mamoaka onjam-peo mahery hamelezana ny rano mitete amin'ny faritra maro amin'ilay hazo fihinam-boa. Ny fikorianan-drivotra haingam-pandeha an'ny mpankafy dia manampy ny vongan-drano hiditra ao anaty ala ...
Product Detail RY3W boom sprayer azo ampiasain'ny karazana traktera rehetra, azo ampiasaina izy io, fandidiana tsotra, matetika ampiasaina amin'ny famongorana aretina sy bibikely bibikely, otrikaina ravina ary tsifotra ahidratsy. Ny sprayer fampiatoana traktera dia mety indrindra amin'ny famafazana vokatra amin'ny lemaka lehibe, ary mihantona ao ambadiky ny traktera. Ny zotram-pifandraisana PTO dia mampifandray ny paompy tratra sy ny tsindry sprayer, ary ny paompy faneriterena kosa mamoaka ny fanafody amin'ny tsorakazo ary mivoaka amin'ny alàlan'ny noz ...
Masinina zavona tanana
Antsipirian'ny vokatra Ny atomizer vaovao dia mampiasa teknolojia rocket moderina, motera jet tsy misy fikojakojana, tsy misy faritra mihodina, tsy misy rafitra fanosotra, firafitra tsotra, tsy misy fitafiana eo anelanelan'ny ampahany, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany, androm-piainana maharitra ary fikojakojana tsotra. Miaraka amin'ny fanjifana solika ambany sy ny fahombiazan'ny asa avo lenta, vokatra teknolojia avo lenta izy io ho an'ny famafazana bibikely sy famonoana otrikaretina. Ny masinina dia milina misy tanjona roa miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny kalitao azo antoka. Tombony 1. Ity milina ity ...
Product Detail Ny mpijinja mijinja Mini dia vokatra vaovao miaraka amin'ny haitao mandroso sy ny fananany manokana, izay karazana tokana ao Shina. Izy io dia manana rafitra familiana samihafa, mamono mora foana. Ity milina ity dia ampiasaina indrindra hijinjana sy hamatorana ireo vatan-kazo ambany toy ny varimbazaha, vary, orza, ôt, sns. Azo ampiharina amin'ny havoana, tehezana, saha kely, sns. Ankoatr'izay, misy tombony kely, rafitra, fijinjana tanteraka, mololo kely, fatorana mandeha ho azy, ary fametrahana, es ...
Antsipirian'ny vokatra Ny mpitaingin-drivotra dia karazana mpanangom-bokatra manokana ary mizara ho karazany telo: mandeha irery, taratra traktera ary mihantona. Ny masinina dia mety indrindra amin'ny fijinjana vary, kijana, varimbazaha, katsaka, sns. Ny vokatra dia azo kapaina ary aparitaka amin'ny mololo mba ho lasa masinina mijinja varimbazaha izay misampina ny rambon'ny sofina hatao maina. Ny voamaina maina dia alaina ary mioty amin'ny mpanangom-bokatra mitambatra amin'ny mpijinja Ny sakan'ny fanapahana dia omena tanteraka an'ireo ...
Traktera mandeha amin'ny milina mandeha amin'ny herinaratra
Product Detail Ny traktera mandeha amin'ny lalana RY dia mitaingina sy mitondra trakitera mandeha kendrena misy tanjona roa. Izy io dia manana rafitra kely sy matevina, maivana, fampisehoana azo antoka, androm-piainana lava, fandidiana mora, ary fahaiza-mihazakazaka tsara. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny tany maina, tanimbary, tendrombohitra sy saham-boankazo, tanimbary, sns ... izay afaka miasa tany, fambolena rotary, fijinjana, famoloana, fanondrahana, ary asa hafa & fitaterana azo tanterahina. Afaka mifandray amin'ny manokana ...
Product Detail Tractor dia milina mandeha amin'ny herin'ny tenany ampiasaina hisintona sy handroahana ireo milina miasa mba hamita ireo asa finday isan-karazany. Azo ampiasaina amin'ny herin'ny asa raikitra koa izy io. Izy io dia misy rafitra na fitaovana toy ny motera, ny fandefasana, ny fandehanana, ny familiana, ny fampiatoana ny herinaratra, ny fivoahan'ny herinaratra, ny fitaovan'ny herinaratra, ny fifehezana ny fiara ary ny fanamafisana. Ny herin'ny motera dia ampitaina avy amin'ny rafitra fandefasana mankany amin'ny kodiarana mitondra fiara hahatonga ny traktera. Amin'ny fiainana tena izy dia mahazatra ...
Masinina kely-Traktera kely
Antsipirian'ny vokatra Ny traktera kely dia mety amin'ny tany lemaka, tendrombohitra ary faritra be havoana, ampiarahina amin'ny fitaovana sahaza ho an'ny famafazana, ny tanimboly rotary, ny fijinjana, ny fambolena, ny famoloana, ny famafana ary ny asa hafa, ny fitaterana lavitra amin'ny zotram-pitaterana. Ny traktera kely dia fehikibo fehikibo, saingy misy hidy hydraulic hiakatra sy hidina. Tsy afaka mampitovy ireo milina sy fitaovana miavaka amin'ny toeram-pambolena, mitovy amin'ny traktera mandeha. Tombony: vidiny ambany ary mora ampiasaina. Endri-javatra 1. mety ho ...
Product Detail Ireo mpijinja mekanika dia manana laharana 2, 3 efatra, 5, 6 ary 7 ary laharana 8. ampidiro ny sampana manaparitaka, ny zana-ketsa, ny mpamboly kapila ary ny kapila, boaty zezika. Ny masinina voa dia miasa amin'ny rafitra mekanika. Ny mpamboly mekanika dia manana rafitra fifamatorana teboka telo. Azo entina mora any an-tsaha. Ny mpamafa motera dia azo ampiasaina amin'ny famafazana voa. Ny milina dia azo ampiasaina hamafy voa isan-karazany (toy ny katsaka, tanamasoandro, landihazo, betiravy siramamy, soja, voanjo ary zazakely ...